Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka KGS oo si rasmi ah xilka ula wareegay. - Awdinle Online
Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka KGS oo si rasmi ah xilka ula wareegay.
May 2, 2020 (Awdinle Online) –Munaasabad kooban oo ay xilka ku kala wareegayeen Gudoomiyaha Cusub ee Golaha Shacabka dowlad goboleedka konfur galbed Soomaaliya Dr Ali siciid Fiqi iyo Gudoomiyihii hore Abdikadir Sharif Sheekhunaa Maye ayaa maanta ka dhacday Xarunta barlamanka mamulka ee Magaalada baydhabo
Munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb galay, Gudoomiye ku xigeenada 1aad iyo 2aad ee Golaha.
Guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka konfur galbed ayaa lagu wareejiyay dhamaan dukumiindiyadii Golaha iyo, Hindiso sharciyeedyadii horyaalay golaha .
Gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Abdikadir Sharif Sheekhuna Maye, ayaa Munaasabadda ka jeediyay qudbad uu kaga hadlayay waxyaabihii u qabsoomay iyo ajandooyinka horyaalla Golaha, .
Guddoomiyaha Cusub ee Golaha Shacabka dowlad goboleedka konfur galbed Dr Ali siciid Fiqi ayaa sheegay in uu la kaashan doono qorshayaasha qabyada ah ee golaha horyaalla, waxuuna bogaadiyay howlihii wanaagsanaa ee uu hormuudka uga ahaa Golaha Shacabka Mudane Sheekhuna Maye.
Previous articleDowladda Somalia Oo Ka Digtay Fatahaado Iyo Roobab Laga Cabsi Qabo
Next articleCoronavirus wuu soo kordhayaa Maalin walba Bulshaduna talooyinka Caafimaad si dhab ah uma qaataan “Sideebuu Xaalku Noqon Doonaa”?